Malina: Ahoana ny fomba hitarihana fitarihana B2B bebe kokoa miaraka amin'ny Navigator Sales LinkedIn | Martech Zone
LinkedIn no tamba-jotra sosialy ambony ho an'ireo matihanina B2B eran'izao tontolo izao, ary azo lazaina fa fantsona tsara indrindra ho an'ireo mpivarotra B2B hizara sy hampiroborobo ny atiny. Ny LinkedIn izao dia manana mpikambana mihoatra ny antsasa-tapitrisa tapitrisa, miaraka amin'ireo olona ambony efa maherin'ny 60 tapitrisa no voataona. Tsy misy isalasalana fa ny mpanjifanao manaraka dia ao amin'ny LinkedIn… resaka fotsiny hoe ahoana no ahitanao azy ireo, mifandray amin'izy ireo, ary manome fampahalalana ampy hitany fa misy lanjany amin'ny vokatrao na serivisinao.
Ny solontenan'ny varotra manana hetsika tambajotran-tserasera avo lenta dia mahazo 45% tombony bebe kokoa amin'ny varotra ary 51% no mety hahatratra ny fe-potoana fivarotany.
Inona no atao hoe fivarotana sosialy?
Voamarikao ve ny fomba tsy nanomezako anarana an'ity lahatsoratra ity hoe Ahoana ny fomba hitarihana mitarika bebe kokoa LinkedIn? Izany dia satria ny fetran'ny LinkedIn dia tena tsy ahafahan'ny a matihanina amin'ny varotra hampiasaina tanteraka ny sehatra hanaovana fikarohana sy hamantarana ny hoavin'izy ireo manaraka. Voafetra amin'ny isan'ny hafatra azonao alefa isam-bolana ianao, firy ny fitarihana azonao tahirizina, tsy azonao fantarina hoe iza no nijery ny mombamomba anao, tsy afaka miditra amin'ireo singa rehetra azo karohina ianao ary tsy manana fidirana amin'ny prospect ivelan'ny tambajotra eo akaikinao.
Dingana 1: Midira ho an'ny Navigator an'ny varotra LinkedIn
LinkedIn Sales Navigator manampy ny matihanina amin'ny varotra hikendry ireo olona sy orinasa marina amin'ny alàlan'ny fahazoana mivoaka amin'ny vina sy mpanapa-kevitra mety. Miaraka amin'ny LinkedIn Sales Navigator, ny matihanina amin'ny varotra dia afaka mahazo fahitana amin'ny varotra mahomby amin'ny fivarotana mahomby, mijanona ho vaovao ary vaovao hatrany amin'ny kaontinao sy ny fitarihanao ary manampy amin'ny famadihana antso mangatsiaka ho resaka mafana. Ny fiasa amin'ny sehatra dia ahitana:
Fitarihana mandroso sy fikarohana ao amin'ny orinasa - tanjona kendrena na orinasa misy sehatra fanampiny, ao anatin'izany ny zokiolona, ​​ny asany, ny haben'ny orinasa, ny jeografia, ny indostria ary maro hafa.
Soso-kevitra momba ny firaka - Ny Sales Navigator dia hanoro hevitra ireo mpanapa-kevitra mitovy amin'izany amin'ny orinasa iray ihany ary afaka mahazo ny fitarihana amin'ny birao, finday, na amin'ny mailaka ianao.
CRM Sync - Araraoty ny kaonty misy ny fiara mandeha auto, voatahiry ary mitarika avy amin'ny fantsom-pianaranao mankany amin'ny CRM havaozina isan'andro.
Miaraka amin'ny Sales Navigator dia afaka manara-maso mora foana ny fitarihana sy ny fifandraisana misy ianao, mijanona ho vaovao hatrany amin'ny fifandraisana sy kaonty, ary ampiasao mora foana ilay sehatra.
Makà fanandramana maimaimpoana amin'ny Navigator an'ny varotra LinkedIn
Dingana 2: Amboary ny lisitry ny prospect anao ary soraty ny kopia mangatsiakao
Misy teny iray ampiasainay ao amin'ny LinkedIn rehefa mifandray amin'ny olona iray izahay ary avy hatrany dia tratry ny hafatra mivarotra sy mivarotra miditra… Voakasika. Tsy azoko antoka hoe iza no tonga tamin'io fe-potoana io, saingy lasibatra tanteraka izany. Tahaka ny fanokafana ny varavaranao eo aloha io ary misy mpivarotra mitsambikina avy hatrany eo am-baravarana ary manandrana mivarotra anao. Hoy aho hoe "andramo" satria ny fivarotana ara-tsosialy dia tena tsy misy ifandraisany amin'ny fitomboana, ny fananganana fifandraisana sy fanomezana lanja izany.
Ny ekipa ao amin'ny Cleverly dia manam-pahaizana amin'ny fanoratana kopia ivelany mangatsiaka izay tena mahazo valiny. Manoro hevitra izy ireo mba hialana amin'ireo lesoka telo ireo:
Aza manjavozavo: Aza atao teny fluff indostrialy ary miresaha amin'ny akany manokana, amin'izay ianao afaka mampiasa prospect lingo ao anaty izay tena ampiasaina. Niching midina dia mampitombo ny taham-pahavitrihana.
Mampiasà fohy: Izay rehetra mihoatra ny fehezan-teny 5-6 dia matetika no esorina amin'ny LinkedIn, indrindra rehefa mijery amin'ny finday. Lazao amin'ny mpanjifanao mety hahafahanao manatsara ny fiainany amin'ny teny vitsy araka izay azo atao. Ny ankamaroan'ny hafatra avo lenta nataon'i Cleverly dia fehezanteny 1-3.
Manomeza porofo ara-tsosialy: Fironana voalohany ho an'ny fanantenana dia ny tsy mino anao. Noho izany, manakiana ny fanomezana anarana mpanjifa malaza, ny valiny manokana azonao, na ny manondro fandalinana tranga tena izy.
Manoratra am-pahalalahana ny filaharan'ny hafatra izay mazava, mifampiresaka ary atosika ho an'ny tombam-bidinao.
Dingana 3: Aza kivy!
Ny ezaka varotra mivantana rehetra dia mitaky fikasihana marobe hamakivakiana ilay vinavina. Sahirana ny vinavinanao, mety tsy manana teti-bola izy ireo, na mety tsy mieritreritra akory ny hahazo ny vokatrao na ny serivisinao. Izany no maha-zava-dehibe ny fanananao drafitra fanaraha-maso tsy miovaova. Raha vantany vao mifandray aminao ianao, ny vinavina dia lasa fifandraisana ambaratonga voalohany, ary ao amin'ny tamba-jotra mandrakizay, ka mikolokolo azy ireo amin'ny fanarahana sy atiny.
Mandefa hafatra fanaraha-maso 2-5 am-pahamendrehana amin'ny fanantenana, mba hahafahan'izy ireo manome lanja bebe kokoa amin'ny filaharana. Ohatra, matetika ny touch 3 dia fandalinana tranga iray izay manaporofo ny valiny.
Dingana 4: Ampitomboy amin'ny fahendrena ny razamben'ny firenentsika
Raha toa mampatahotra izany dia azonao atao ny manohy mampiasa Fetsy. Manana ny ekipany sy ny sehatra misy azy izy ireo izay iarahan'izy ireo mifantoka amin'ny tanjonao amin'ny anaranao ary avy eo dia atosika ao anaty boaty fisoloan'ny solontenanao ny varotra ahafahan'izy ireo miasa manidy azy ireo. Io dia ahafahan'ny mpivarotra manao izay tsara vitany… mivarotra. Avelao ny fivarotana ara-tsosialy amin'ny Hendry!
Ny tabilao Cleverly dia mampiseho anao sary namboarina tamin'ny fampielezan-kevitra tao amin'ny LinkedIn, ao anatin'izany ny metrika toa ny tahan'ny fifandraisana, ny valin'ny valiny, ny isan'ny fanasana nalefa, ary ny isan'ny voavaly.
Ny sehatr'i Cleverly dia miharo amin'ny LinkedIn hanome anao fomba tsara kokoa hitantanana, hanaraka ary hamaly ny vinavina - ao anatin'izany ny modely tsindrio sy mandefa mba hamonjy anao hamaly ora.
Ny solaitrabe Cleverly dia miasa ho toy ny CRM LinkedIn natsangana mba hitazomana ny ho avinao amin'ny tsingerin'ny varotra. Sivano ny hafatra araky ny Fanentanana, Tags, Sentiment Response, Snoozed, na tsy mbola novakina mba hitazomana ny fantsom-pivarotana varotrao ary aza hadinoina ny valiny.
Jereo ny fampahalalana momba ny fifandraisana isaky ny fanantenana LinkedIn sy ny tantaran'ny resadresakao LinkedIn manontolo ao anatin'ny takelaka iray. Raiso an-tsoratra izay mety ho antenainao ary ampio marika manokana mba ho mora zahana sy azo karohina. Araraoty ihany koa ny valinteninao mba hivoahana amin'ny fotoana sy daty manaraka mba hampitomboana ny vokatra.
Sivano ireo fifandraisana LinkedIn vaovao amin'ny anarana, fampielezana, tag, toerana, daty, mailaka ary nomeraon-telefaona. Alefaso ny mombamomba ny fifandraisana ary ampidino ny lisitry ny fifandraisana mifototra amin'ny masontsivana azonao ampiana amin'ny CRM anao.
Na dia mamorona am-pahalalahana ireo hafatra fanentanana ao amin'ny LinkedIn anao aza ianao, dia afaka manamboatra fanatsarana sy fanatsarana miorina amin'ny valin'ny fanentanana. Raha tianao dia azonao atao ny mifandray aminay hijerena sy hahazoana valiny amin'ny fanovana hafatra nataonao.
Valio ny fanontanianao, ianaro ny fampiasana fampiasa dashboard, ary mahazoa hevi-baovao avy amin'ny fampielezan-kevitra avo lenta hanovana vinavina bebe kokoa.
Cleverly dia manana sehatra manome anao snapshot nohavaozina tamin'ny fampielezan-kevitra tao amin'ny LinkedIn, ao anatin'izany ny metrika toa ny tahan'ny fifandraisana, ny valin'ny valiny, ny isan'ny fanasana nalefa ary ny isan'ny voavaly. Isaky ny mahazo valiny tsara ianao ao amin'ny boaty LinkedIn, dia mampandre anao avy hatrany amin'ny mailaka ianao.
Makà fakan-kevitra maimaimpoana miaraka am-pahendrena
Fampahalalana: mpiara-miasa amin'i LinkedIn Sales Navigator ary Fetsy.
Tags: b2bb2b manantenafivarotana sosialy b2bFetsymangatsiaka mitadymahita fitarihanamailakamailakaLinkedInNavigator mpivarotrafizahana-taratrafivarotana ara-tsosialy